शक्तिशाली लिंक निर्माण प्रोफाईलका लागि उपयुक्त ब्याकलिङ्कहरू के हो?
यो लेख डिजाइन गर्न को लागी डिज़ाइन गरिएको छ कि तपाईं को सबै भन्दा जरूरी आधुनिक खोज इन्जिन अनुकूलन रणनीति को मूल को समझने - लिंक इमारत.
बैकलिङ्कहरू एक राम्रो व्यवसाय अनलाइन उपस्थिति सिर्जनाको लागि आवश्यक छन्. वेबमास्टर्स र लिंक बिल्डर्स नियमित रूपमा कसरी इनबाउन्ड लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरूको बहस गर्छ, कसरी तिनीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, र कसरी उच्च-गुणस्तर लिङ्क निर्माणको अवसर खोज्न सकिन्छ।. कुरा यो हो कि तपाईले खोजी इन्जिन दण्डबाट बच्न गुणस्तर र जैविक लिङ्क प्रोफाइल बनाउन आवश्यक छ. तपाईं वेब स्रोतहरु को प्राधिकरण र प्रतिष्ठा को बारे मा हेरविचार गर्न को लागी कहां छ कि तपाईंको लिंक्स आ रही हो किनकी यसले तपाईको साइट प्रतिष्ठा को बारे मा खोज इन्जिनहरु लाई बताउँछ।. तपाईंको आगमन लिङ्क तपाईंको साइटको स्थान निर्धारण गर्दछ, यसकारण लिंक इजाजतपत्र मार्केटिंग र खोजी इञ्जिन अनुकूलन अभियानहरूको एक आवश्यक भाग हुनुपर्छ.
आज हामी कुन ब्याकलिङ्कहरू मा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं र किन उनी वेबसाइट पदोन्नतिमा एक प्रमुख भूमिका खेल्छन्.
त्यसो भए पछि के लिंकहरू छन्?
एक बैकलिंक एक हाइपरलिंक हो जुन एक साइटबाट अर्कोमा आउँछ. त्यहाँ दुई प्रकारका ब्याकलिंकहरू dofollow र nofollow छन्. डाउफ गर्नुहोस् लिंकहरू ती हुन् जुन हामीले हाम्रो लिङ्क प्रोफाइलको आवश्यकता पर्दछौं. यी लिङ्कहरूसँग मान लिङ्क गरिएको वेब स्रोतलाई "नाम रस" को रूपमा मानिन्छ. "गुगल बोट्स पार्स dofollow backlinks र उल्लेख गरिएको साइट को रैंक उच्च. Nofollow ब्याकलिङ्कहरूलाई पनि तपाईंको लिङ्क प्रोफाइलमा राखिएको हुनुपर्दछ Google लाई देखाउन को लागी कि तपाईं विभिन्न लिंक वेब स्रोतहरु लाई न केवल लिंक रस प्राप्त गर्न. यी लिंकहरूमा कुनै नोफलाइन ट्याग छैन र लिङ्क गरिएको स्रोतमा कुनै पनि मूल्य पार नगर्नुहोस्. तिनीहरू खोज बटहरू र नियमको लागि दृश्यात्मक छैनन्, औसत प्रयोगकर्ताहरू द्वारा पछ्याउन सकिँदैन. तिनीहरू केवल ब्रान्ड उल्लेखको रूपमा सेवा गर्छन्. यद्यपि, यदि तपाइँसँग तपाइँको लिङ्क इमारत अभियानको सही पहुँच छ भने, तपाइँ dofollow वाले साथ कुनै फाईल ब्याकलिङ्कहरू स्थानान्तरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।.
किन ब्याकलिङ्कहरूले Google मा रैंकिंग मापदण्डको रूपमा सेवा गर्छन्?
जब Google ले तपाइँको साइटमा लिंक इशारा गरिसकेको छ, यसले वेब स्रोतको प्राधिकरणसँग लिङ्कमा रहेको साइट साईटलाई सम्बद्ध गर्दछ।. Google लाई वेबसाइटको लागि एउटा मतको रूपमा आकर्षित गर्दछ. यदि मतदान प्रतिष्ठित साइटबाट आउँदैछ भने, यसले सकारात्मक रूपमा वेबसाइट रैंकलाई प्रभाव पार्न सक्छ र यदि बिरुवा स्प्यामीबाट आउँदैछ भने, कम गुणस्तरको वेब स्रोतले तपाइँको साइटमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ SEO.
सामान्यतया, एक साधारण लिङ्क निर्माण योजना यस तरिकामा देखिन्छ: "यदि एक विशेष वेब स्रोतले यो सामग्रीसँग लिङ्क गर्नको लागि पर्याप्त मूल्यवान हुने सामग्री टुक्रा मान्छ, र यो स्रोत राम्रो-अनुक्रमणिका र प्राधिकरण हो, त्यसपछि लिङ्क गरिएको वेबसाइट एक राम्रो वेबसाइट पनि हुनुपर्छ ".
तपाईंको ब्याकलिङ्क रणनीतिको लागि आवश्यक कुरा
गुणस्तर ब्याकलिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न, तपाईलाई वेबसाइटको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। लिङ्क निर्माण गर्न चाहन्छु. यसैले तपाईंको लिंक इमारत अभियान को तल रेखा मा तपाईंलाई एक व्यापक बजार आला अनुसन्धान को संचालन गर्न र तपाईंको ध्यान को लायक वेब स्रोतहरु को खोज को आवश्यकता छ।. सर्वोत्तम विकल्प उच्च पेजरङ्क वेबसाइटहरू र ब्लगहरूका साथ सम्पर्क गर्ने हो जुन तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित छ.
ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिकाहरू एक अतिथि पोस्टिंग हो. तपाईं आफ्नो अतिथि पोस्टको लिङ्क सम्मिलित गरेर सजिलै संग आफ्नो साइटमा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. दुर्भाग्यवश, यस लिंक को आसपास धेरै स्पैम गतिविधिहरु लाई पोस्टिंग टेक्नोलोजी अतिथि पोस्टिंग प्रतिष्ठा को कटाई. 2012 मा Google ले पेंगुइन अद्यावधिक स्थापना गर्यो जसले स्प्याम लिङ्क निर्माण प्रविधिको प्रयोग गरी वेबसाइटहरु को रेटिङलाई नष्ट गर्यो.
यही कारण छ कि हाम्रो दिनमा लिङ्क बिल्डर्सले मात्र लिङ्कबाट मात्र कार्बनिक पाठ प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ:
एउटा वाक्य जो पाठमा प्राकृतिक रूपमा देखिन्छ र लक्षित लक्ष्य खोज्न सक्दैन।.
एक वाक्य जो तपाईंको ब्रान्ड नामसँग मेल खाँदैन.
तपाईलाई उल्लेख गर्दै लेखको नाम.
एसईओ अनुकूलित लंगर पाठको साथ तपाईंको ब्याकलिंक लुकाउनुको सट्टा, तपाईको पाठकहरूलाई थप जानकारीको साथ तिनीहरूलाई जानकारी दिनुहोस् कि उनीहरूलाई तपाईंको लिङ्क पछ्याउन र उनीहरूले कसरी लाभ उठाउन सक्छन् Source .